Marquette Community Day 2021 Recap • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Marquette Community Day 2021 မှတ်တမ်း
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 17th, 2021
စတုတ္ထနှစ်ပတ်လည် Marquette အဝန်းနေ့ နောက်ထပ်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ MCD တည်ထောင်သူ Ben Robinson နှင့် Markus Haskins တို့ ဦး ဆောင်သော Dutchtown အိမ်နီးချင်းများက Dutchtown ရပ်ကွက်၌ကလေးများအတွက်ကျောပိုးအိတ်များနှင့်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများကိုပေးအပ်သည်။ Marquette ပန်းခြံ.
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် ၀ င်ငွေနည်းမိသားစုများကိုအချိုးအစားမညီစွာရိုက်ခတ်မှုနှင့်အတူ Marquette Community Day သည်၎င်းတို့၏ကလေးများအားကျောင်းစတင်ချိန်၌ငွေကြေးအထောက်အပံ့များဖြည့်ရန်ကျောပိုးအိတ် ၅၀၀ ကျော်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ MCD နှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့သည် စိန့်လူးဝစ်ကျန်းမာရေးဌာန အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများအားကာကွယ်ဆေးများပေးရန်
Marquette Community Day's 2021 Comeback
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကပ်ရောဂါကန့်သတ်ချက်များကြောင့်တစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ပြီးနောက်ဤပွဲစီစဉ်သူများသည်၎င်းတို့ချစ်မြတ်နိုးသောအသိုင်းအဝိုင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းမှအပမည်သည့်အရာကိုမျှရပ်တန့်မည်မဟုတ်ချေ။ Marquette Community Day ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Ben Robinson, Jr. က“ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကလူနှစ် ဦး ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားစည်းရုံးတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ ယခုနှစ် Marquette Community Day နှင့် ပတ်သက်၍ ရပ်ရွာ ၀ င်များမှမေးခွန်းများဖြည့်ပါ။ ဒီပွဲအတွက်လိုအပ်မှုကမပျောက်သွားဘူး၊ အဲဒါကပိုပိုပြီးများလာတယ်။ ”
Marquette Community Day တွင်လှုပ်ရှားမှုများသည်တစ်မိသားစုလုံးကိုဗဟိုပြုသည်။ ကျောပိုးအိတ်များ၊ ကျောင်းအထောက်အပံ့များ၊ ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆံပင်ညှပ်များအပြင်ကလေးများသည်မြင်းစီးခြင်း၊ အိမ်ခုန်ခြင်းနှင့်လျှောတိုက်ခြင်း၊ အမြှုပ်မြှားပစ်ခြင်းနှင့်အခြားပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများစွာပါ ၀ င်သည်။
Marquette Community Day ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Markus Haskins က“ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုတဲ့ကျောပိုးအိတ်တွေ၊ ထောက်ပံ့မှုတွေ၊ မိသားစုတွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေး၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့လူထုတည်ဆောက်မှုတွေပိုရလာမှာကိုငါတို့ကျော်လွန်ခဲ့တယ်။ မရ။
Marquette Community Day အကြောင်းနောက်ထပ်
MCD တည်ထောင်သူ Ben Robinson နှင့် Markus Haskins
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့် Marquette Community Day သည်တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် Dutchtown မိသားစုများ၊ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ရင်ဆိုင်နေရသောထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များ၊ စိုးရိမ်မှုများနှင့် ၀ န်ထုပ်များကိုဖြေရှင်းရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျောင်းပြန်တက်ခြင်းအခမ်းအနားသည်အိမ်နီးချင်းကလေးများအတွက်ကျောင်းပြန်တက်ရန်စိတ် ၀ င်စားရန်ကျောပိုးအိတ်များ၊ အထောက်အပံ့များ၊ ဆံပင်ပုံစံအသစ်များနှင့်ပုံစံများ၊ MCD တွင်သူတို့မိသားစုများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သောပျော်ရွှင်စရာပုံပြင်များနှင့်အတူအပြုသဘောဆောင်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပွဲစီစဉ်သူ Markus Haskins နှင့် Ben Robinson တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကြီးပြင်းလာပြီး Roosevelt အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ Haskins နှင့် Robinson တို့သည် Marquette Park အပန်းဖြေစင်တာ၊ ပြည်တွင်းအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားလူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အခမ်းအနားတွင်ရရှိနိုင်သည့်အရာများ၊ အထောက်အပံ့များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ Marquette Community Day သည်တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကျေးဇူးရှင်သို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်မယူသောစပွန်ဆာမပါဘဲလုံးဝအောက်ခြေလူတန်းစားဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင်လူငယ်များနှင့်မိသားစုများတိုးပွားလာသည်ကိုမြင်ရုံမကပါ ၀ င်သောပါ ၀ င်သောမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏တိုးတက်မှုကိုလည်းမြင်သည်။ ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပံ့ပိုးကူညီသူများပါဝင်သည် Grand Crossကုသမှု၊ Dutchtown ပင်မလမ်းများ, Dutchtown စျေး, Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု, ပန်းနှင့်ပေါင်းပင်များ, Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း, Silverstar Foundation တစ်ခု, South City ဆေးရုံ, တောင်ဘက်ဘေးထွက်နေရာများ, တစ် ဦး မစ်ရှင်အပေါ်ကြယ်, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, စိန့်လူးဝစ်လူထုကောလိပ်စိန့်လူးဝစ်ကျန်းမာရေးဌာန၊ စိန့်လူးဝစ်ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေ, STL စတိုင်, သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ, လိုအပ်နေသောလူငယ်များနှင့်ပိုပြီးအများအပြား။
Marquette Community Day ကိုသွားကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့သလား။ ပန်းခြံအတွက်မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးတွေကိုငါတို့ဆီပို့ပါ info@dutchtownstl.org နှင့်လာရောက်လည်ပတ် dutchtownstl.org/marquette Marquette Park မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုသိဖို့
ဓာတ်ပုံများကို Ben Robinson, Kayla Colwell ၏ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် Chip Smith ပါနှင့် Nick Findley ပိုရှာပါ Marquette Community Day မှဓာတ်ပုံများ ထိုအပေါ် DutchtownSTL Flickr စာမျက်နှာ.
အောက်မှာ Filed Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown ဖြစ်ရပ်များနှင့် Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 17th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette ပန်းခြံ Marquette Community Day 2021 မှတ်တမ်း